Saakow: Faah faahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa xasuuqii loo geystay Al-Shabaab “Dhageyso” – Radio Muqdisho
Saakow: Faah faahin dheeraad ah oo ka soo baxaysa xasuuqii loo geystay Al-Shabaab “Dhageyso”
Faah faahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa duqeyn maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa loogu geystay Degmada Saakow ee Gobolka Jubbada Dhexe, halkaas oo lagu xasuuqay horjoogeyaal iyo maleeshiyaad ka tirsan argagixisad Al-Shabaab.
Duqaynta oo dhacday fiidnimadii xalay ayaa waxaa bartilmaameed ku ahaa goob machad ah oo ay dhagarqabayaasha Al-Shabaab ku marin habaabin jiren carruurta ay xoogga ku askareynayaan .
Xiliga ay duqaynta dhacaysay waxaa goobta ku sugnaa Afhayeenka maleeshiyada Al-Shabaab Cabdicasiis Abuu Muscab iyo Xasan Yacquub oo ka mid ah horjoogeyaasha kooxda.Al-shabaab, kaasi oo dhaawac halis ah ka gaartay duqeynta.
Taliya Ururka 49 aad guutada 10 aad Qaybta 43 aad ee Ciidanka Xoogga dalka Faarax Maxamed Turbac ayaa Warbaahinta Qaranka u sheegay in howlgalkii xalay lagu dilay in ka badan 30 isugu jirta Maleeshiyaad iyo horjoogeyaal ka tirsan Al-Shabaab, kuwaasi oo ku sugnaa goobta ay carruurta ku marin habaabinayeen.
Dowladda Soomaaliya oo garab ka heleysa saaxiibbadeeda caalamka ayaa dar dar geliyay duqeymaha iyo weerarrada lagula beegsanayo argagixisada Al-Shabaab goobaha ay ku dhuumaaleysanayaan.
Halkan ka dhageyso Wareysiga Taliyaha
Askar loo soo xiray dilkii loo geystay gabar ardayad ah “Dhageyso”